ဖိအားမြင့်ခံ ကွန်ကရစ်အုတ် (Autoclaved Pressed Concrete Brick) - BaganMart
High Precision Topcon GPS, Topcon Hiper SR
Acquaatoilet bowl with kirei electric bidet
တည်ကြည် ခန့်ညားသော Wood Door Design
ကွညျ့ရှု့သူ အရအေတှကျ : 2193 view counts
စြေးနူနျး : 105 Kyats per Piece(s)
Model : APC
Size : (230 x 110 x70) mm
Bending Strength : 3.3 MPa (478.5 psi )
Compressive Strength : 29.25 to 33.79 MPa ( 4241 to 4900 psi )
Weight : 3.2 kg / Piece
The ancient Romans developedahighly sophisticated type of concrete that has withstood the test of time for nearly two thousand years. They use the volcanic ash pozzolan for its chemical reactivity. The silica bases in today`s AAC Block closely emulate their techniques.
Weather and Earthquake Resistant:
The AAC house isasurvivor many times in earthquake. They have also good property to resist any weather condition.
AAC Blocks provide superior thermal insulation by offering an array of benefits such as thermal mass, thermal inertia, whole wall coverage and low air infiltration. These combine and translate into energy savings which do not degrade and continue to appreciate over time.It has better thermal and sound insulation due to less joint. This result in saving energy cost of air-conditioning.
AAC`s advantage in construction is its quick and easy installation since the material can be routed,sanded and cut to size on site using standard carbon tip band saws,hand saws and drills.
AAC Block is lighter than clay brick. Hence, it reduce dead load of structure.So,we can save steel up to 20~25%,concrete up to 10% and energy saving 15%.
ဖိအားမြင့်ခံ ကွန်ကရစ်အုတ် (APC Brick) များသည် နိုင်ငံတကာတွင် အသုံးပြုလျက်ရှိသည်မှာ ဆယ်စုနှစ်များစွာကတည်းကပါ။ အနီးကပ်ဆုံး အနေဖြင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများဖြစ်သော အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ တရုတ်နိုင်ငံ တို့တွင်လည်း တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုနေကြသည်ကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံသားများ အရည်အသွေးမှီ၊ နိုင်ငံတကာ အဆင့်အတန်းမှီသော APC အုတ်များကို အသုံးပြုနိုင်ရန် တင့်သင့်သောဈေးနှုန်း၊ ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေး၊ ပေါ့ပါးခိုင်ခံ့မူကြောင့် လျှင်မြန်သောတည်ဆောက်မှုကိုရရှိပါသည်။ ထို့ အပြင် ထုတ်လုပ်သုံးစွဲမှုသက်တမ်းတလျှောက် စွန့် ပစ်ပစ္စည်းမရှိသဖြင့် လူနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို အကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။ သက်တမ်းကြာရှည်ခံပါသည်။ အပူဒဏ်ကိုကာကွယ်သည် လေအေးစက်အသုံးပြုမှုကို လျှော့ချသုံးစွဲနိုင်သည် မီးလောင်မှုကို ၇၀၀`C ကို ၄ နာရီကြာခံနိုင်ပါသည်။ အဆိပ်အတောက်မရှိပါ။ အငွေ့ အသက်မရှိပါ။ ဆူညံမူကိုလျော့ချပေးသည်။ လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် သင့်တင့်သောဈေးနှုန်းဖြင့် အထာကျ ခိုင်ခံ့ ခေတ်မှီသော အဆောက်ဦးကိုရရှိရန် APC Brick ဖြင့်တည်ဆောက်ပါ အကောင်းဆုံး အဆောက်အဦး ရရှိရန် လူကြီးမင်းတို့ နှင့် ထပ်တူကြိုးစား ဆောင်ရွက်ပေးနေပါပြီ။
For ဖိအားမြင့်ခံ ကွန်ကရစ်အုတ် (Autoclaved Pressed Concrete Brick)
May I get the quotation for "ဖိအားမြင့်ခံ ကွန်ကရစ်အုတ် (Autoclaved Pressed Concrete Brick)" ?